mac – Saturngod
kLSNoLaunchPermissionErr: User doesn’t have permission to launch the app (managed networks)
Posted on Updated June 27, 2021 by saturngod
App အဟောင်းတွေကို ဖွင့်သည့်အခါမှာ kLSNoLaunchPermissionErr: User doesn’t have permission to launch the app (managed networks) ဆိုပြီး ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ brew install upx sudo upx -d /Applications/my_app.app/Contents/MacOS/my_app ပြီးရင်တော့ App ကို ပြန် run ရင် ရပါပြီ။
Posted on Updated September 22, 2019 September 22, 2019 by saturngod
Support Default Zawgyi in Mac OS 10.15
Posted on Updated June 7, 2019 by saturngod
Mac OS 10.15 မှာ zawgyi font အတွက် Noto San Zawgyi ပါလာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Language က encoding ကို iOS မှာလို Zawgyi ပြောင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ iOS မှာ ပါသည့် language setting အတိုင်း စမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဇော်ဂျီ ကို global fallback အနေနဲ့ support လုပ်ထားတာ တွေ့တယ်။ ဒါကြောင့် Mac OS 10.15 မှာ ဇော်ဂျီ font သွင်းဖို့ မလိုဘူး။ မြန်မာစာ fallback က Zawgyi အနေနဲ့ ပါတယ်။ App တွေ အကုန်လုံး […]
Posted on Updated September 19, 2015 September 19, 2015 by saturngod
MMFontFallBack Mac App
Posted on Updated July 2, 2014 August 20, 2013 by saturngod
Mac OSX 10.8 မှာ မြန်မာစာ ပါဝင်လာပြီးတော့ ဇော်ဂျီ ကောင်းစွာမပေါ်တော့လို့ သူ့မှာ ပါတဲ့ မြန်မာစာကို ဖျက်ပစ်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျွန်တော် blog ရေးတဲ့အခါမှာလည်း OS မှာ ပါဝင်တဲ့ MyanmarMN က စာလုံးတွေ မမှန်တဲ့အတွက် စာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ fallback fix လုပ်နည်းလေး စဉ်းစားမိပြီး စမ်းကြည့်တာ အောင်မြင်သွားပါတယ်။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/Resources အောက်က fallback plist လေး ပြင်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်။ လူတိုင်း အသုံးလွယ်အောင် Mac OSX app လေး လုပ်ထားတယ်။ ကြိုက်တဲ့ font ကိုရွေးပြီးတော့ Update Fall […]
Posted on Updated January 31, 2013 November 7, 2012 by saturngod
Update with new data download at https://github.com/downloads/saturngod/ornagai-V2/ornagaien.dictionary.zip Unzip in ~/Library/Dictionaries/ or /Library/Dictionaries/ Check ornagaien in Dictionary.app > Preference > ornagaien * Fixed CSS. So, no need to remove Myanmar Unicode Font on your Mac. ornagai iOS app will update soon …..